Madaxweynaha:’Marna raali kana nihin derbiga laga dhisayo xadka Soomaaliya iyo Kenya”-Sawirro – Radio Muqdisho
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo uu wehliyo Ra’iisalwasaraha xukuumadda Soomaaliya Dr Cumar Cabdirashiid Cali ayaa maanta ka qaybgalay kulanka golaha shacabka Soomaaliyeed,iyadoo madaxweynuhu khubad ka horjeediyay Baarlamaanka Soomaaliya isagoo ka warbixiyay xaaladaha guud ee dalka xilligan.
Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khubadiisa uga hadlay arimaha badan oo ay kamid tahay ammaanka, siyaasadda, kobcinta dhaqaalaha dalka iyo baahinta hanaanka Federaalka,isagoo sheegay in dowladdu ay ku guuleysatay in ay sameyso maamulo ku meel gaar ah oo uu dalku yeesho.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in dowladda ay dadaalo badan u gashay sidii dalka nabad loogu soo dabaali lahaa maadaama uu dalku dagaal kula jiro kooxaha nabad diidka ah ee UGUS.
“Dagaalna waan garanaynaa maalin waxbaa riixeysaa maalinta waa lagu riixeyaa laakin xaaladda amni ee guud ahaan dalka waa ay wanaagsan tahay,horumar ayaa laga gaaray qaabeynta dagaalka lagula jiro kooxaha argagaxisada”, ayuu yiri madaxweynaha.
Madaxwaynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh ayaa mar kale golaha shacabka ka hor cadeeyay in aysan jirin doonin wax muddo kororsi ah marka uu dhamaado waqtiga dowladda federaalka oo hadda jirta.
Madax waynaha oo hadalkisa sii wata ayaa dhinaca kale ka hadlay derbiga dowladda Kenya ay sheegtay in ay ka dhisayso xadka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya, isagoo sheegay in Soomaaliya ay markasta ka go’an tahay deris wanaag isla markaana dowladu marna ogolaan doonin derbiga laga dhisayo xadka labada dalka.
“Marna raali kama noqoneyno derbiga xukuumadda Soomaaliya gudi ayay u saartay arintan si ay u baaraan ayna keenaan xaqaa’iqa ka jira”, ayuu sheegay madaxweyne Xasan.
Madaxwaynaha Jamhuuriyadda Federalka ayaa mudanayaasha Barlamaanka Soomaaliyeed u diray hambalyo ku aadan maalinta Xuriyadda Soomaaliya oo ah 55 sano guuradii ka soo wareegatay 1 July 1960 dii.
Cali Americo oo Kooxda Wariyaasha Kala Qeyb Galay Tartan Ispoorti Afurna u Sameeyay Wariyaasha “Sawirro”
Cali Americo oo Kooxda Wariyaasha Kala Qeyb Galay Tartan Ispoorti Afurna u Sameeyay Wariyaasha "Sawirro"